Kuthatha Ntoni Ukwakha 'Uhlobo Lwezindlu' - Indlela Yokuphila
Kuthatha Ntoni Ukwakha 'Uhlobo Lwezindlu'
Nazi izindlu zemithi -Uyazi, iqela lamaplanga abazali bakho badibanisa, bafaka amagama athukayo kunye nohambo olongezelelekileyo eDepho yasekhaya ukuze bafumane izipikili ezingakumbi- kwaye ke kukho Iindawo zokugcina imithi . Njengakuyo, izindlu zokoqobo emithini, ezinombane, amanzi abalekayo, kunye nohlobo lokhombiso lwala maxesha olunokwenza uJoanna Gaines abuthathaka emadolweni. UPete Nelson Ubunikele ubomi bakhe kubo bobabini, kodwa le yokugqibela yeyakhe ngokwenene yaziwa ngokuba. Kwaye kwinkqubo, uye waguqula umxholo 'awungekhe upholile ukuba ...' ukuphupha kusukuzonke kuhambo olupheleleyo lwamawaka abantu.
UPete wabona umthi womkhuhlane womthi ukhula ecaleni kweshishini lakhe, elazalwa ngaphandle komntu wonke ngo-1987. 'Bendingakwazi ukulala, bendinemincili, utshilo ngelixesha awayecinga ngalo ukudala izindlu ezizonke ezimiswe emoyeni. Ukuxhasa imali ngombono wakhe, wakha izindlu ezisemgangathweni kunye nezindlu zemithi, kodwa kungekudala, baya besanda abantu kuye beza kuye, kangangokuba ngo-1994, wavuma Iindawo zokugcina imithi: Ubugcisa kunye neCraft yokuPhila kwiLimb -Isiqingatha sokuqala seshumi elinambini abhalileyo-kwaye ngo-2006, wavula indawo yokuphumla ebusuku eSeattle apho abantu babenokulala kwenye yoyilo, awalubiza ngokuba Indawo yomthi womthi . Ngo-2012, iPlanethi yezilwanyana yeza ibiza, iphosa abasebenzi bayo kuthotho lwenyani IiMasters zoMthi , apho iikhamera zilandele uPete kunye neqela likaNelson Treehouse njengoko beyilele iindlela ezinkulu abantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi, kubandakanya neeselebs (uShaq wababiza ukuba bakhe i-speakeasy eyadini yakhe kwisiqendu esinye esiphawuleka).
Njengokuba umboniso usiya, kunjalo nokukhangela 'izindlu zemithi,' ezikhulayo ehlotyeni kunye nokuphela kobusika, xa kubanda kakhulu ukucinga ngokuchitha iiyure ngaphandle-nokuba isiphelo sishushu. Ngokuqinisekileyo, ukujongwa kwedatha yeGoogle Trends kutyhila indlela uPete ahambelana ngayo nesihloko esithi: 'Izindlu zomthi zikaNelson' ngumbuzo wesine aziwa kakhulu xa abantu bekhangela izindlu ezithethiweyo. Ubekwe phakathi 'kwezona ndlu zemithi zibalaseleyo' kunye 'nezindlu zemithi eziqeshisayo'- kwaye inzala ayibonisi zimpawu zokuncipha.
'Indlu yomthi engqondweni,' ndiyibiza njalo. Sisifo, kwaye indoda, iyinyani, utshilo uPete. 'Abantu bayazithanda.'
Inxalenye enkulu yomzobo, utshilo, yindlela uyilo oluveza ngayo isimangaliso, umnxeba oya kumaxesha alula, kwaye zibonelela ngokusaba ngokoqobo kubomi bemihla ngemihla. Kodwa ngaba nabani na ogqiba ukwakha indlu emithini ngokwenene bayazi ukuba bazifaka entwenini? Ukuba uzifumene urhawuzelela ukwenza eli phupha libe yinyani, awuwedwa. Nantsi into ekufuneka uyazi.
Yeyiphi Imithi Yeyona Ilungileyo Kwindawo Yokugcina Umthi, Ngapha koko?
Kungenxa yokuba une-gnarly, twisty, umthi omkhulu-okanye isixhenxe-eyadini yakho ayithethi ukuba bangabagqatswa abafanelekileyo bokuxhasa indlu. 'Eyona mithi mihle yimithi ehlala ixesha elide: Ezona zisisiseko yi-oki, imephu, i-redwood kunye ne-douglas firs. Uza kubona uninzi lwazo kwilizwe liphela, kwaye kwindawo elungileyo, banokuhlala amakhulu eminyaka, utshilo uPete, ecaphula iPitchford Estate eNgilane njengomzekelo.
Imifanekiso yeLifa leMveliImifanekiso kaGetty
Ifakwe kwi mdala emhlabeni , indlu yomthi yaqala ukukhankanywa ngo-1692, yavuselelwa ngo-1760, yaphinda kwakhona ngo-1980. Usenokuyityelela unanamhla, ukungqina ukuba njengoko inoveli injalo, xa zilungiswe kakuhle kwaye zikhathalelwe, indlu yomthi ayikho intsha.
Konke malunga nokugcinwa, njengaso nasiphi na isakhiwo, utshilo uPete. 'Ukuba awususi amagqabi ngaphandle kweedatha kunye nenkunkuma enokuthi ivele, akuthathi xesha lide ngaphambi kokuba yonke into ihambe. Kodwa ukuba [uyakwenza, kwaye] usemithini eyiyo — njengomthi omdala oki olungileyo — indlu ingahlala ixesha elide njengomthi. '
Ke, Mngakanani 'weNdlu' anokuba nguNdlu wam?
Umda awukho. Ubuncinci, uPete akayifumani. 'Sabeka ibhafu eshushu emthini malunga nonyaka ophelileyo,' uyakhumbula. 'Umbhobho oshushu womsedare obumhle.' (Wafaka ingxangxasi kwibhalkoni yolunye uyilo eVermont.)
Iqela likaNelson liye lenza rhoqo izindlu zemithi ezineendawo zokuhlambela ezisebenza ngokupheleleyo, amagumbi okulala amaninzi, iikhikhithi (ezininzi ezinee-cooktops ezine-burner, ii-microwaves, kunye neefriji ezinobungakanani obugcweleyo), nkqu nezinto zangoku, ezinje ngemeko yomoya ophakathi kunye nobushushu. Ubukhulu bendlu, kokukhona isezantsi emhlabeni —'kuba imithi ihamba kakhulu, 'utshilo uNelson-kwaye, ngamanye amaxesha, ixhaswa zizithuba ezongezelelweyo, kunye nemithi.
'Abantu abafuna ukuphakama ngaphezulu kwendlu enkulu yomthi banokufuna ukongeza indlwana kanomyayi,' uyongeza. Ibiyinto edumileyo ebuzwayo, kunye nokuqinisekisa ukuba kukho indawo (kunye nohlahlo-lwabiwo mali) lwendawo ephezulu kunye nebhulorho eqhagamshela kubo ukusuka kwindlu enkulu yomthi ukuya 'kwi-hangout yesathelayithi' kufutshane. Yiyo leyo Usapho lwaseSwitzerland uRobinson Uluvo olumnandi lomthi, 'uyachaza.
Ukuba ufuna obunye ubungqina bokuba izindlu zokugcina imithi zinokuba yiyo nantoni na ofuna ukuba ibe yiyo, sukujonga ngapha koko Idabi leenkwenkwezi -phefumlelweyo, i-1,000-square-foot wonder UNelson Treehouse uyile.
Yintoni oyifunayo ngokwenene yokwakha indlu yomthi?
Ngaphandle kwemithi kunye nemithi esemgangathweni, kunjalo. UPete uwufumene lo mbuzo amaxesha amaninzi waqala ukuthengisa uyilo lomthi, izixhobo, kunye nencwadana epheleleyo yokufundisa, Indawo yokuhlala: Isikhokelo soMyalelo , kwiwebhusayithi yakhe. Elinye lezona zinto zibaluleke kakhulu siseti ye Iibholiti eziqhotyoshelweyo -Okanye ii-TABs, ziyaziwa kolu shishino- nto leyo yenza kanye le nto unokucinga ngayo: Ibambelela emthini eqongeni lendlu.
Ixabisa malini le nto?
Ngelixa uNelson akha indlu yakhe yokuqala yomthi — indawo yokufihla kangangesikwere ezingama-250 — ngee- $ 7,000, sukulindela ukubalekela kwithamsanqa elinjalo. 'Iproep creep iyinyani,' uhleka uNelson. Rhoqo, iphupha liqala msulwa ngokwaneleyo: Kutheni ungafaki umbane? Kwaye ukuba unombane, kuya kufuneka ubenekhofu. Kodwa uyakufuna ifriji encinci kunye nendawo yokupheka, ukuze ukonwabele ukutya okulula okuhamba nayo. Kodwa ke uya kufuna ukuhlamba imagi yakho kunye neepleyiti xa ugqibile, ke uyakufuna isinki-kunye nemibhobho yamanzi. Kwaye ukuba uyayifaka le ndawo, usenokwakha igumbi lokuhlambela. Kwaye, kwaye, annnnd ... kungekudala, loo moya 'ulula' uphakamisa ixabiso lakho ngamanani amathandathu. Mhlawumbi ndiphakathi kwamanani amathandathu.
'Ukuba ujonga indlu yomthi etyunjwe ngokupheleleyo, yiphathe njengokongeza kwikhaya lakho,' ucacisa uNelson. 'Ukuba ukongeza igumbi lokuhlambela okanye ikhitshi ekhayeni lakho, ukhawuleza ungene kuluhlu lwama- $ 100,000.'
Kukwanjalo nakwindawo yokugcina imithi. Yinto enye ukuba ufuna indawo egqunyiweyo yokufunda iincwadi kunye nokuxhoma, mhlawumbi usebenzisa intambo yolwandiso ukunika amandla isibane; Kukujongana namanzi abalekayo kunye nombane owaneleyo ukuba nezixhobo zombane eziqhuba iindleko, ngokukhawuleza. UNelson uqikelela ukuba malunga neepesenti ezingama-80 zeeprojekthi zakhe zigqityiwe ukubandakanya ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
'Ukuba kukho igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, kufuneka ubenendleko ezinzima zokwakha, utshilo. 'Oko kunokuthetha i-150,000 yeedola kwezabasebenzi.' (Eqhelekileyo IiMasters zoMthi Indlu ithatha malunga neeyure ezili-1,500 ukwakha, uNelson ucacisa, esongeza ukuba ulwakhiwo luya kuxabisa i-100 leedola ngeyure emsebenzini. Kwaye ukuba ufuna iqela likaPete likwenzele konke, ewe, oko kuqala $ 300,000 .)
Ulawulo lukaNelson lobhontsi? Lindela ukuba iindleko zakho zizonke zingama-60 epesenti yabasebenzi, ama-40 eepesenti yezixhobo. Ukusondeza la manani kufutshane noNelson wokuqala, i-7,000 yeedola yokwakha indlu kuthetha ukuba wenza lula uyilo lwakho, ulunge ngokwenyani, kwaye ube I-Indiana Jones Umkhweli wenkunkuma.
Kukho isithethe esihle kwihlabathi liphela lokukhangela izixhobo: ukuya kwi-Craigslist, okanye ukukrwada kwikontraka, utshilo. Yiloo nto kanye eyenziwa nguNelson kwindlu yakhe yokuqala yomthi, kwaye kutheni uyilo lweenyawo ezingama-250 zibiza imali encinci: I-7,000 yeedola yayikwizinto ezizodwa, ingabali iindleko zexesha lakhe.
Imihombiso elula yasekhaya
'Ndizama ukuyenza ngaphandle kwemali,' ucacisa uNelson. 'Ndandiqinile njengengxaki yam.'
Ngaba ndingavavanya ukuqhuba omnye ngaphambi kokuzibophelela kuyo?
Okwangoku, usenokubuza ukuzibophelela kwakho. Ngaba uya kuthanda ukuba ngumntu ongumthi womthi? Ngaba umzamo uwufanele? Ngaba kufanelekile ukuba uthathe into elula oyithandayo, njengokufunda inaliti eMandarin endaweni yoko? Zininzi iindawo eziza kukuvumela ukuba uchithe ubusuku endlwini yomthi (uNelson unepropathi ezimbini ngokwakhe ngenxa yaloo njongo). Isilumkiso esifanelekileyo, nangona kunjalo: inokuqinisa kuphela ukuthanda kwakho izinto, ngakumbi xa ucinga ngeshishini lokurenta onokuthi uhambe ngalo. NjengoNelson wathi, Treehouse kwiBongo iyinyani. Yonke iyinyani.
UCandace Braun Davison Sekela Mhleli UCandace Braun Davison ubhala, ahlele, kwaye avelise umxholo wokuphila ophakathi kweempawu zabantu abadumileyo ukuya kwi-DIY-sleeve zakho, lonke elixesha ukulandela ezona zizathu zibalaseleyo: ukufuna eyona cookie itshokholethi ilungileyo kwihlabathi.
Indawo yokutyela ekhanyayo
tarek i-moussa yokutshaya
imihombiso emhlophe yomthi wexmas